ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကွင်းအဘို့အအကောက်ခွန်အချိန်, နေရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအရသိရသည်ခြားနားသည်။ တစ်ဦးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလက်စွပ်သမိုင်းကြောင်းအဆန်းခဲ့, ဒီလိုလက်ဆောင်ပေးထားသောအခါကမင်္ဂလာဆောင်လက်စွပ်ကနေသီးခြားဖြစ်ခဲ့သည်။
Ladies, ထနားထောင်ပါ။ သငျသညျအလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကသင်သည်သင်၏အထူးနေ့ကအကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏စားဆင်ယင်, အခမ်းအနား, ပထမဦးဆုံးကခုန်စိတ်ကူးင်; တိုင်းအသေးစိတ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကအစဉ်အဆက်ရှိတယ်ရုံမည်မျှမိန်းမတို့အဘို့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကွင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များစဉ်းစားရပ်တန့်ခဲ့တာလဲ
သင်တန်း၏, ထိုအစွမ်းကုန်အရေးပါမှုသင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောနေ့ဖြစ်၏။ သို့သော်လက်စွပ်သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏ကျန်များအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝတ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်တစ်ခုခုနှင့်လည်းစုံလင်ခြင်းရှိဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဘာကြောင့်ယောက်ျားမရနိုင်, သူတို့ရဲ့ status ကိုကြေညာဖို့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကွင်းဝတ်ဆင်နိုင်လျှင်? ကောင်းပြီ, တကယ်မလိုပါဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးစုံတွဲများသူတို့ရဲ့ status ကိုအထောက်အထားဝတ်ဆင်ရန်လူကိုပိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ပိုပြီးအလွယ်တကူ nontraditional ဆက်ဆံရေးလက်ခံအဖြစ်။
ရွှေ, ရွှေဖြူ, အဝါရောင်ရွှေ, ပလက်တီနမ်သို့မဟုတ်ပယ်လေဒီယမ်မြင့်တက်?
ယနေ့ Jewel ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များအတွက်သတ္တုတစ်ခုအံ့ဖှယျအမျိုးမျိုးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပလက်တီနမ်နှင့်ပယ်လေဒီယမ်အဖြစ်ရွေးချယ်စရာပိုပြီးလူကြိုက်များဖြစ်လာနေချိန်မှာရွှေအမြဲတမ်းစိတ်ကူးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေဖြူကွင်း vs. ကိုရွှေထအဝါရောင်ကိုရွှေ vs. အကြားခြားနားချက်များအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းနောက်ဆုံးတွင်သင်၏အသက်တာ၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကိုယ်စားပြုသောလက်ဝတ်ရတနာအဘို့ရှေးခယျြဖို့ရာသတ္တုဆုံးဖြတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများချကျဉ်းမြောင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကျစရိတ်အားဖြင့် daunted ခြင်းကိုမပြုကြနှင့်။ တတ်နိုင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကွင်းများအတွက်ရရှိနိုင်အများအပြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ သင်တန်း၏, "တတ်နိုင်" ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအလွန်မြင့်မားပုဂ္ဂလဒိဋ္ဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ်ဂျက်ကွဲပြားစေခြင်းငှါနေချိန်မှာဒါပေမယ့်လူတိုင်းတဦးတည်းရှိပါတယ်။
round solitaire, ဘဲဥပုံ, မြ, သစ်တော်သီးဒါမှမဟုတ်မင်းသမီးလေးဖြတ်စိန်, စတိုင်များ, ပုံစံမျိုးစုံနှင့်ရူပ၏ပေါင်းစပ်အမှန်တကယ်အဆမဲ့ပါပဲ။
C လေးလုံး (Carat Weight, Cut, Color, Clarity) တစ်ခုစီသည်အဆင့်များအကြားကွဲပြားခြားနားမှုကိုသရုပ်ဖော်သည့်စိန်ဇယားဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ ပိုမိုလေ့လာပြီးသောအခါသင်ကိုယ်တိုင်စိန်များကိုတွေ့ရန်လိုပါကသင်၏ဒေသခံလက်ဝတ်ရတနာဆိုင်သို့သွားပါ။ စိန်တစ်လုံးတွင်သင်ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးထားသည့်အရာကိုပိုမိုနားလည်ပါ။
ကျောက်မျက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကွင်းအရောင်နဲ့စတိုင်လ်တစ်ခုမျိုးစုံနဲ့ထူးခြားတဲ့နည်းရိုးရာကြည့်များအတွက်စုံလင်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ စပျစ်သီး-မှုတ်သွင်းကွင်းအများအပြားဆင်တူ, ကျောက်မျက်ကွင်းပုံမှန်အားထို့နောက်သေးငယ်စိန်သို့မဟုတ်အရောင်ကျောက်များကဝိုင်းကြောင်းဗဟိုကျောက်ကဲ့သို့ကျောက်မျက်ရတနာနှင့်အတူဒီဇိုင်းအရည်အသွေးမြင့်ကျောက်မျက်, Emerald နှင့်ပတ္တမြားထံမှနီလာရန်, morganites, opal ... အတူလုပ်နေကြသည်။
နှစ်ပေါင်းကာလကိုတစ်လျှောက်လုံးအဘယ်သူ၏အမှတ်တံဆိပ်ဇိမ်ခံနှင့်သာမန်ထက်နှင့်အတူပြောရလျှင်ဖြစ်လာကြပါပြီထိုကဲ့သို့သော Tiffany, Cartier နှင့်က Harry Winston အဖြစ်အများအပြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလက်စွပ်ဒီဇိုင်နာများ, ရှိခဲ့ပါပြီ။ ရှားပါးထူးခြားတဲ့စိန်အရာ၌ဝါကြွားခြင်းနှင့်ချမ်းသာကျော်ကြား clients များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိမကြာခဏထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလက်စွပ်ဒီဇိုင်နာများပိုပြီးဂုဏ်သိက္ခာနှင့်သီးသန့်ပေးသည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ဒီဇိုင်နာနာမည်အမှတ်တံဆိပ်လက်ဝတ်ရတနာများသောအားဖြင့်ပိုပြီးစျေးကြီးသောလက်ဝတ်ရတနာကမ်ဘာပျေါတှငျလူသိများသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်နာများရုံသင်တို့အဘို့မိမိစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏စုံလင်သောအခိုက်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောလက်စွပ်ကိုရှာဖွေရန်သေချာပါပဲ။